Ukwelashwa ukulahla ikati. Isifo sesikhumba esiyingozi
Isifo sesikhumba esivame kakhulu kunazo zonke amakati asekhaya asekhaya. Kwenzeka kulezi zilwane kanzima futhi kuvame ukubuya. Ukwelashwa okulahla ikati kufanele kwenziwe ngokunakekelwa okukhulu kunakho konke. Ngoba lesi sifo sithathelwana kakhulu. Uma ukwelashwa ukulahla ikati akukona ngesikhathi, khona-ke lesi sifo singathola ezinye izilwane ezifuywayo, kanye nomnikazi. Kunokuba uphathe futhi ulawule kanjani lesi sifo esilwaneni sakho?
Lishay emakati: ukwelashwa, izithombe kanye namafomu wesifo
Kungumonakalo ophefumulayo esikhumbeni nasezinyaweni ezibangelwa isikhunta. Ukwelashwa okulahla ikati kwenziwa ngokucatshangelwa ukuthi leli gama linqotshwa izinhlobo ezimbili zezincane ezincane - microsporia kanye trichophytosis. Isikhathi sokugxilwa kwezinhlobo zombili lezi zifo sisuka ezinyangeni ezintathu kuya kwezintathu. Ngemuva kokuqedela, ikati iqala ukumbozwa ngama-bald amancane. Banda kancane kancane futhi, uma isilwane singelashwa, bangakwazi ukuhlala endaweni enkulu yomzimba - ikati lizobonakala libala. Amathrekhi okuqala e-bald avame ukuvela emzimbeni, amapayipi, izindlebe, umsila. Izindawo ezithintekile zigcwele izikali. Lesi sifo senziwa ngezinhlobo ezintathu - ngokuyisisekelo, ngokujulile nangokwemvelo. Izilwane ezinamandla ziyihlobo lesibili. Kodwa i-lichen e-atypical idideka kalula nge-scuffs evamile kanye ne-abrasions. Ikakhulukazi uma isilwane sakho singasemncane. Ukuze ugweme ubunzima kanye nokwelashwa kokulahla ikati ngaphandle kwezinkinga, thintana nodokotela wezilwane. Isilwane siyathinteka ngokuxhumana nezinye iziguli, kanye nokuxhumana nezinhlayiya zokungcola okuhlala ezicathulweni zabantu. Ukunqanda ukuxilongwa - icala lezilwane zezilwane. Uyokwabela izivivinyo ze-laboratory. Futhi isebenzisa isibani se-ultraviolet sokuxilongwa okubonakalayo. Esikhathini esidlule, lokhu ukutheleleka ezilwaneni kwakungelashwa futhi amakati agulayo alala. Namuhla kukhona ukwelapha amakati hhayi eyodwa. Kubalulekile ukulandela izincomo zesidakamizwa, unikeze izilwane ezibulala izilwane ezibekwe zona futhi uphathe amabala ahlanzekile ngama-antifungal compounds. Udokotela wezilwane uzokuzijwayeza ngekhono lokusebenzisa izidakamizwa zokulwa nezidakamizwa. Imishanguzo yanamuhla iyasebenza kakhulu. Ngokuvamile uzodlulisela isilwane emtholampilo, kodwa izinqubo eziyisisekelo oyozenza ekhaya.
Okokuqala, kubalulekile ukusika uboya ezindaweni ezithintekile. Zigcwele ama-crusts, okudingeka adambise. Lokhu kwenziwa ngesisombululo sensipho emnene. Amachashazi adlala nge-iodine noma enye i-antiseptic. Enye yezindlela eziphumelelayo kakhulu ngamafutha e-sulfuric. Izinwele ezihlutshiwe kufanele zishiswe. Ikamelo nezambatho zakho - zivimbela njalo amagciwane. Isilwane esigulayo kumele sibe sesinye, akufanele sivunyelwe ukuxhumana namanye amakati. Futhi, akufanele uvumele embhedeni nasefayeni. Hlanza nge-chlorhexidine zonke izinto izilwane ezigulayo eziye zaxhumana nazo. Imithi efana ne "Vakderm", "Microderm" isetshenziselwa ukwelashwa okusebenzayo. Nika izidakamizwa "Clotrimazole" no "Bioparox". Phatha ikati kuze kube yilapho ukuhlolwa kungalungile. Ukuvimbela ukunganaki kungcono ukwenza imishanguzo yokuvimbela.
Yini okufanele uyenze uma i-gomus ichithwa ngezinyo: iseluleko samazinyo
Exercises USindi Krouford. Imfihlo yokuba sibalo ephelele
I Yak-42: izibuyekezo abagibeli
Isiraphu 'i-Bromhexine'. Incazelo yokulungiselela
"I-Seraphim iphiko lesithupha" nelinye ifa lobuciko likaMikhail Vrubel